Ireo firavaka Nokia hafa ao amin'ny MWC2017: Nokia 5 sy Nokia 6 | Androidsis
Ireo firavaka Nokia hafa ao amin'ny MWC2017: Nokia 5 sy Nokia 6
Jose Alfocea | | MWC, About us
Hatramin'ny alahady lasa teo, raha mbola tsy nisokatra ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday 2017 tany Barcelona, Nanomboka nanaitra anay ny Nokia ny olona rehetra miaraka amin'ny fiverenany mahatalanjona izay mbola ho hita ny hoaviny, lojika. Tamin'ny nahaterahan'i Nokia 3310 2017, terminal ho an'ireo izay te hiantso sy handray antso, handefa sy handray hafatra, hilalao bibilava, ary zavatra hafa kely. Saingy tsy nametra ny tenany i Nokia amin'ny fiverenany amin'ny "famerenanana" ny iray amin'ireo finday be mpivarotra sy be kitra indrindra hatrizay. Nanome fiainana ny finday avo lenta koa izy io.
Manomboka amin'ny Nokia 3, smartphone ho an'ny fampiasana fototra ary manodidina ny 139,00 euro ny vidiny, ary mitohy amin'ireo maodely roa asehontsika anio, Nokia 5 sy Nokia 6. Marina, marina izany, tsy dia nanatsemboka anarana loatra izy ireo nametraka anarana, Tianay ny filokana Nordic ary mampatsiahy antsika ny fotoana izay tsy paoma sy vahindanitra daholo akory ny zava-drehetra.
1 Ny fahaterahan'i Nokia dia miaraka amin'ny Android
Ny fahaterahan'i Nokia dia miaraka amin'ny Android
Ny Nokia Finnish, izay mpitarika ny telefaona finday mbola tsy niadian-kevitra dia tsy nahalala ny fomba hifanarahana amin'ireo fiovana ary niafara tamin'ny fahafatesan'ny latent. Eny, satria na eo aza ny varotra amin'i Microsoft sy ny fihenan'ny izay haingana sy haingana kokoa noho ny fiakarany ho any ambony, dia toa Tsy nametra-pialana mihitsy i Nokia fa nanjavona tamin'ny sehatry ny telefaona finday, ary miverina izao, amin'ny lafiny iray, mitaona amin'ny alahelo manome aingam-panahy ny Nokia 3310 2017, ary etsy ankilany, miaraka amin'ny Telo Android smartphone izay fiakaran'ny nomenclature koa dia fiakaran'ny vidin-javatra sy ny vidiny, na dia ny modely lafo indrindra aza tsy azo antsoina hoe lafo.
Androany isika dia mamakafaka ny faharoa sy fahatelo amin'ireo dingana ireo, ny Nokia 5 ary ny Nokia 6. Eo amin'ny farany ambany, araka ny fantatrao, ny Nokia 3
Ny smartphone Nokia 5 dia tonga amintsika miaraka amin'ny rafitra fandidiana Android 7 Nougat amin'ny fanjakana madio. Manana a Efijery 5,2-inch ary famahana HD amin'ny 720p.
Ao anatiny, processeur Snapdragon 430 (matanjaka kokoa noho ny Nokia 3) miaraka amin'ny RAM 2 GB sy fitehirizana anatiny 16 GBna afaka manitatra koa izahay noho ny slot amin'ny microSD card izay ananany.
Miaraka amin'ny Bateria 3.000 mAh, ny Nokia 5 dia mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny tontolo andro.
Mikasika ny sary sy ny horonan-tsary, Fakan-tsary aoriana 13 megapixel sy fakan-tsary 8 megapixel eo aloha.
189 euro ny vidiny ary hatolotra ao loko efatra manga, volafotsy, mainty ary varahina hifanaraka amin'ny mpanjifa.
Manohy miaraka amin'ny mpikambana farany amin'ny fianakavian-tsarimihetsika Finnish vaovao izahay, ny Nokia 6, smartphone iray hafa izay eo am-piandrasana ny vidiny sy ny fahombiazan'ny trio ity.
Tsy dia nisy tsiambaratelo momba ny Nokia 6 satria, raha ny marina, dia efa natomboka tany Sina io volana roa lasa izay, na dia izao aza ho tonga amin'ny fomba ofisialy any amin'ny kaontinanta taloha amin'ny vidiny 229 euro izay, araka ny ho hitanao amin'ny toetrany, dia tsy ratsy mihintsy.
Ny Nokia 6 dia a smartphone finday avo lenta miaraka amin'ny efijery 5,5 santimetatra sy ny vahaolana Full HD amin'ny 1080p. Ao anatiny no misy mpanodina Snapdragon 430 Qualcomm miaraka amin'ny a RAM 3GB, Fitahirizana 32 GB anatiny mivelatra amin'ny karatra microSD sy a Batterie 3.200 mAh.
Nokia dia hamoaka kinova "Premium" amin'ny mainty manjelanjelatra miaraka amin'ny RAM 4 GB ary fitehirizana 64 GB mandritra ny 30 euro bebe kokoa.
Miaraka amin'ny andiam-pilalaovana Nokia 3, Nokia 5 ary Nokia 6, ilay orinasa finoa manan-tantara Manolo-tena mazava tsara izy hanokatra atody eo amin'ny tsenan'ny finday marani-tsaina, hiditra amin'ny tapany afovoany amin'ny hery sy ny tanana miaraka amina rafitra fandidiana mahazatra ny ankamaroan'ny maro. an'ny finday avo lenta, zavatra iray izay mitoetra ho ampahany amin'ny fototr'izany ho orinasa tsy manam-paharoa. Mazava ho azy, rafitra madio amin'ny fitaovana kalitao ary misy vidiny.
Ho afaka hamerina ny tsena mifanentana aminy ve i Nokia noho ny tantarany taloha, sa vao manomboka ny tsy fahombiazana vaovao isika? Ny fotoana sy ny mpanjifa ihany no hanana ny teny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Ireo firavaka Nokia hafa ao amin'ny MWC2017: Nokia 5 sy Nokia 6
Ny Huawei Watch vaovao natolotra tao amin'ny MWC 2017